Tianjin Forman Furniture inotungamira fekitori pakati kuchamhembe kweChina iyo yakasimbiswa muna 1988 ichinyanya kupa zvigaro zvekudyira nematafura. Forman ine hombe yekutengesa timu ine vanopfuura gumi nyanzvi dzekutengesa, ichibatanidza online uye isingaiti nzira yekutengesa, uye inogara ichiratidza yekutanga dhizaini kugona mune ese kuratidzira, vatengi uye vatengi vanoona Forman semubatsiri wechigarire. Kugoverwa kwemusika kuri 40% muEurope, 30% muUSA, 15% muSouth America, 10% muAsia, 5% mune dzimwe nyika. FORMAN ane anopfuura 30000 mativi metres, muridzi 16 seti jekiseni michina uye makumi maviri punching michina, epamberi michina senge yekunyorera robhoti uye jekiseni kuumbwa robhoti zvakatoiswa kushandiswa kugadzirwa mutsara
iyo yakavandudza zvakanyanya kurongeka kweforoma nekugadzirwa kwekugadzira. Vakuru manejimendi manejimendi nehutarisiro hwemhando yepamusoro pamwe nevashandi vane hunyanzvi vanoona chigadzirwa chinobudirira cheyakanyanya kupfuura chiyero. Iyo imba yekuchengetera hombe inogona kuve neanopfuura 9000 mativi emamita matura anotsigira fekitori anogona kumhanya zvakajairika mumwaka wepamusoro pasina dambudziko. Imba hombe yekuratidzira ichagara yakavhurika iwe, yakamirira kuuya kwako!
Chaizvoizvo chero chimwe chezvinhu izvi chingafarire iwe, ndokumbira utizivise. Tichafara kukupa kotesheni paunogamuchira zvakadzama kutaurwa. Tine nyanzvi yedu yeR & D mainjiniya kuti tisangane nechero ipi yekugadziriswa, Tinotarisira kuzogamuchira kubvunza kwako munguva pfupi uye tinotarisira kuzove nemukana wekushanda pamwe newe mukati medu ramangwana. Kugamuchirwa kuti utarise kune yedu sangano.
Kuve mhinduro dzepamusoro dzefekitori yedu, edu mhinduro akateedzana akaedzwa uye akatikunda isu vane masimba echiremera. Kuti uwedzere mamwe ma paramita uye chinhu chinyorwa rondedzero, ndapota tinya bhatani kuti uwane yakawedzera ruzivo